Casetify la-hawlgalayaasha Disney si ay u bilaabaan kiisaskooda cusub ee Mac, Apple Watch iyo AirPods iyo kuwo kale. | Waxaan ka socdaa mac
Casetify la-hawlgalayaasha Disney si ay u bilaabaan kiisaskooda cusub ee Mac, Apple Watch iyo AirPods iyo kuwo kale.
Haysashada qalab Apple ah sida Mac ama AirPods Pro ayaa kugu filan inaad ogaato inaad leedahay tayo iyo naqshad. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad siiso taabasho kala duwan mid kasta oo ka mid ah qalabkaaga, waxaad ku dari kartaa kiis si gooni ah loo iibiyay. Apple waxay leedahay qalab u gaar ah sida iPhone iyo Apple Watch. Si kastaba ha noqotee hadaad rabto inaad siiso qoraal asal ah Waa inaad isku daydaa xulashooyinka Casetify ee hadda la midoobay Disney.
Casetify iyo Disney waxay abuureen isbahaysi si ay ugu labistaan ​​aaladahaaga Apple qaab ka duwan oo midabbo badan. Haddii aad rabto inaad siiso taabasho ka duwan kan Apple Watch, Mac, AirPods (nooc kasta oo ay tahayba), ma seegi kartid fursadda ah inaad eegto buugga ay hayaan. Xaqiiqdii waxaa jira qaar ka mid ah xarkahaas ama daboolkaas waxay ku hayaan dareenkaaga.
Wadashaqeyntan cusub ee la soo baxday Disney, waxaa sidoo kale jiri doona taageerooyin kala duwan iyo xeedho. Markii aan ka hadlayno Casetify waa inaan sheegnaa fursadaha habeynta mid kasta oo ka mid ah daboolka ama suumanka ay ku leeyihiin suuqa. Disney's ma noqon doonin mid ka reeban. Waxaan ku sii wadi karnaa inaan ku tirinno qaar ka mid ah naqshadeynta aalado la beddeli karo oo ay ku jiraan aagagga qoraalka iyo halbeegyada.
waa ng, Maamulaha guud iyo aasaasaha shirkadda 'Casetify', ayaa xusay iskaashigan mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan:
Waxaan ku faraxsanahay inaan la shuraakowno mid ka mid ah shirkadaha adduunka loogu jecel yahay, Ku sii gudbinta Casetify iyo Disney labadaba shucuur wadaagga ah ee hal-abuurka iyo male-awaalka ururinta cusub. Ku martiqaadida Disney inay ku soo biirto bulshadeena waxay u baahan tahay dabbaaldeg weyn, mana sugi karno inaan shaaca ka qaadno qaabkeenna casriga ah ee ku saabsan astaanta Disney.
Wali lama hayo iibsi, maadaama la sii dayn doono laga bilaabo bisha soo socota ee Janaayo 20. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku biiri karnaa liiska sugitaanka si aan u noqono kan ugu horeeya ee ogaanaya waqtiga iibsiga uu furmayo sidaasna aan ku noqonay kii ugu horeeyay ee soo bandhiga naqshadaha cusub ee ku saabsan caruusadahayada, kumbuyuutarradeena ama kiisaska dhageysiga (waxaad had iyo jeer fursad u leedahay u habee sidaad u jeceshahay Apple). Qiimayaashu waxay u bilaabmi doonaan qiyaastii 40 euro ama sidaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Casetify la-hawlgalayaasha Disney si ay u bilaabaan kiisaskooda cusub ee Mac, Apple Watch iyo AirPods iyo kuwo kale.
Shaashadda Mini-LED ee loogu talagalay 16-inch MacBook Pro tan 2021